बोर्ड अध्यक्षबाट आशा के र आवश्यकता के ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
बोर्ड अध्यक्षबाट आशा के र आवश्यकता के ?
फिल्मी फण्डा । चलचित्र विकास बोर्डमा गणेश भण्डारी पछिका अध्यक्षहरुले बोर्डमा बसेर चलचित्र क्षेत्रको लागि के गरे भने एक पटक सबैले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । सरकारमा कुनै राजनितीक पार्टिको नेता मन्त्रीको रुपमा आईसकेपछि उनकै सेरोफेरोमा घुम्ने चम्चाहरुलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउँदा साँच्चिकै बोर्डले कहिले उपलब्धी पाएनन् । यति सम्मकी बोर्डमा आउने अध्यक्षलाई बोर्डको आवश्यकता के हो भन्ने समेत थाहा हुदैन ।
पछिल्लो समयका निवर्तमान अध्यक्ष राज कुमार राईको पालामा बोर्ड प्रति सबै चलचित्रकर्मीले केही आशा पक्कै राखेकै थिए । किनकी उनी फिल्मकर्मी हुन् र निर्माता संघ चलाईसकेका व्यक्ति पनि हुन् । उनीसँग राखेका कुनै आशाहरु पुरा भएन । मेरो कार्यकालमा जसरी पनि बक्स अफिस लागु गर्छु भनेर विकास बोर्ड छिरेका राज कुमार राई जस्तो छिरे त्यस्तै निस्के उनीबाट केही काम हुन सकेन । बरु बेला बखतमा विवादमा मुछिए । केही अग्रज कलाकर्मीहरुलाई कलाकार परिचय पत्र वितरण गर्नु बाहेक उनले गरेको काम केही देखिएन । उनले पनि चलचित्र विकास बोर्डलाई संञ्चार मन्त्रालयको दर्ता चलानी शाखा जस्तै अफिसको रुपमा बाहेक माथि उठाउन सकेन ।
त्यसैले अब बोर्डमा अध्यक्ष को आउने भन्दा पनि बोर्डमा अध्यक्षको आवश्यकता किन र चलचित्रकर्मीको आशा के रहन्छ भन्ने कुरा बुझेर मात्र आउन जरुरी छ । सञ्चार मन्त्रालयको सोर्स फोर्समा आउने र अध्यक्ष हो भनेर भत्ता पचाउन आउनेहरुले कहिले बोर्ड को लागि केही गर्न सक्दैन र फिल्म क्षेत्रका समस्याहरु सुल्झाउन सक्दैन । पहिलेका अध्यक्षहरुबाट त्यो प्रष्ट हुन्छ । निर्वतमान अध्यक्ष राजकुमार राईको कार्यकाल सकिएपछि अहिले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको कुर्सी खाली छ । जेठ २२ गते अध्यक्ष राजकुमार राईको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो । कांग्रेस सरकारमा रहँदा राजकुमार राई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियूक्त भएका थिए । राजकुमार राईको कार्यकाल सकिएपछि अहिले उक्त कुर्सीका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा दुई जना देखिने गरि र नदेखिने गरि दर्जन बढी चलचित्रकर्मीहरुको नाम पुगिसकेको छ ।
मोहन बस्नेतले सञ्चार मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै अहिले विकास बार्डको अध्यक्षका लागि हेमन्त बुढाथोकी र राज कुमार राईको नाम अध्यक्षका लागि पुगेको जानकारी रहेको छ । पहिलेको कार्यकालमा रहेर काम गर्न नसकेकाहरु फेरी अध्यक्षकै होडबाजीमा रहनुले बोर्डमा राजनिती कतिको हुन्छ भने प्रष्ट पार्छ । मन्त्रालयमा रहेका माननीय ज्यूले कुन चलचित्रकर्मीले कति सालमा पार्टिको सदस्यता लिएको र कहिलेदेखी राजनिती शुरु गरेको केलाईरहेको खबर बाहिरिएको छ । जे होस् यो पटक मन्त्रिले पठाउने अध्यक्षले बोर्डमा कस्तो राजनीति पैदा गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । पहिलेको जस्तै बोर्डलाई राजनितिक पार्टिको ईकाई कमिटी कार्यालय नबनाऊन् हाम्रो शुभकामना छ ।